'Miseensa paartii siyaasaa hidhame hin beeknu' jedhe Mootummaan Naannoo Oromiyaa - BBC News Afaan Oromoo
'Miseensa paartii siyaasaa hidhame hin beeknu' jedhe Mootummaan Naannoo Oromiyaa
15 Guraandhala 2020
Image copyright Feesbuukii Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Oromiy
Goodayyaa suuraa Obbo Geetaachoo Baalchaa Itti Gaafatamaa Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Oromiyaa
Miseensota paartilee Siyaasaa hidhaman jedhame ilaalchisee odeeffannoo hin qabnu jedhan Obbo Geetaachoo Baalchaa Itti Gaafatamaan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Oromiyaa.
Filannoo Biyyaalessaa hagayya 23 gaggeeffama jedhamee eegamu dursee miseensotni koo hedduun hidhamaaa jiru jechuun KFO'n mootummaa komateera.
Obbo Xurunaa Gamtaa, itti gaafatamaan waajjira KFO, sababa maaliif akka hidhaman waan beekan akka hin qabne himanii ajaja mana murtii malee hidhanii gadhiisu jedhan.
''Guyyaa tokkoof yeroo kaanis sa'aatii saddeetiif hidhanii gadhiisu. Ragaa qabachuuf illee nu rakkiseera'' jedhan Obbo Xurunaan. Godinaalee adda addaa keessatti qabatamaan ragaa of harkaa qabnuun namootni 27 jalaa hidhamuu ibsanii ajaja mana murtii malee hidhaman jedhan.
Hidhamtootattis wanti himame hin jiru jedhan. Dabalataan hidhaa jumlaa naannawa Finfinnee fi godinaalee Oromiyaa gara garaa keessatti raawwateen torbee tokko kana qofatti miseensonnii fi derggartonni isaa 350 ta'an hidhamuu Addi Bilisummaa Oromoo beeksise.
Fulbaana bara 2018 erga gara biyyaatti deebi'ee dhiibbaan siyaasaa dhaabicharra gahaa turuu kan himan hogganni olaanaa dhaabichaa Obbo Mikaa'el Booran, "ce'umsi akka hin gufanneef obsaa turreerra" jedhan.
'Hidhaan jumlaa fi hacuuccaan siyaasaa Oromiyaa keessaa na yaaddesse' - ABO
'Furmaatni dhibdee nageenyaa Lixaa fi Kibba Oromiyaa sammuu keenyaan ala miti'
Itti Gaafatamaan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo hidhamtoota siyaasaa ilaalchisee odeeffannoo hin qabu jedhan.
Haa tahu malee qajeelchi namni tokko sababa ilaalcha siyaasaa isaatiin haa hidhamu jedhu hin jiru jedhan.
''Ani miseensi paartii siyaasaa hidhamuu quba hin qabu. Qaama dhimmi isaa ilaalu irraas hin qulqulleesine. Gama mootummaa Naannoo Oromiyaattis namni paartii siyaasaa keessa jiru haa hidhamu jedhu kallattiin kennames hin jiru,'' jedhan.
Bakka seerri kabachiisamutti ammoo namni hidhamuu danda'a jedhan Obbo Geetaachoon. Abbaan alangaa federaalaa ibsa kenneen ammoo namootni hidhaman kanneen yakkaan shakkamanidha jedha.
Aminestii Internashinaal gabaasa dhiyeenya baaseen Itoophiyaatti filannoo bara kana dursuun hidhaan jumlaa jalqabuun yaaddoodha jedhee ture.
Siyaasa Oromoo: 'Hidhaan jumlaa fi hacuuccaan siyaasaa Oromiyaa keessaa na yaaddesse' - ABO
14 Guraandhala 2020
Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa Hagayya 23 bara 2012 akka gaggeefamu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise
Leencoo Lataa: 'Furmaatni dhibdee nageenyaa Lixaa fi Kibba Oromiyaa sammuu keenyaan ala miti'
"Jibba Tigiraayi irratti qabdan sirreessiisaa ykn biyya of dandeesseedha jechuun labsaa,'' Dr Dabratsiyoon
Itti aanaan Pirezidaantii Naannoo Amaaraa haaraan muudame maal jedhu?
Maqaan kabajaa Jimmaatti akkamiin moggaafama?
Barattoonni 'ugguramuun' dhugaadhamoo diraamaa dha?
Kaartaa dogoggoraa tatamsa'ina koronavaayiras irratti hojjetame
Kuusaa boba'aa xiyyaarota Booying 737 keesatti balfi argame
''Waanti guddaan haaromsichaa uummattoota Itoophiyaan dhufuu isaati'' Maayik Poompeyoo
Teekinooloojii fakkeessanii mul'isuun nama du'e quunnamuun gadda jalaa nama baasaa?
Daldaltoonni Keeniyaa sadi peestaalii fayyadamuusaaniitiin hidhaman
Copyright © 2020 BBC. Qabiyyee iddoola alaatiif BBC'n itti hin gaafatamu. Itti dhiyaachuu keenya gara geessituu.